एन्टिजेन – Himalaya Television
५ वैशाख २०७८ काठमाडौं । सरकारले कोरोना संक्रमितको संख्या बढेसँगै सीमा नाकामा एन्टिजेन परीक्षण गरिरहेको छ । परीक्षणमा पोजेटिभ देखिनेलाई संक्रमित भनेर सूचना पनि निकाल्ने गरिएको छ । तर स्वास्थ्य मन्त्रालयले आधिकारिक वेव साइटमा भने एन्टिजेनका संक्रमितको सूची राख्ने...
एन्टिजेन विधिबाट कोरोना परीक्षण सुरु, विश्वसनीयतामा विज्ञको प्रश्न (भिडियोसहित)
१६ मंसिर, २०७७ काठमाडौं । कोरोना भाइरस पत्ता लगाउन सरकारले एन्टिजेन विधिबाट कोरोना परीक्षण शुरु गरेको छ । सरकारले एन्टिजेन परीक्षण अघि बढाएसँगै विज्ञले भने यसको विश्वसनीयतामै प्रश्न उठाएका छन् । विश्वमा यो विधिको प्रभावकारिता कम देखिएकाले प्रश्न उठेको...
उपत्यकामा एन्टिजेन विधिबाट कोरोना परीक्षण शुरु
१५ मंसिर, २०७७ काठमाडौं । सरकारले आजदेखि एन्टिजेन विधिबाट कोरोना परीक्षण थालेको छ । काठमाडौं उपत्यकामा आजदेखि एन्टिजेन विधिबाट प्रत्येक दिन झण्डै ५ सय जनाको परीक्षण गरिने राष्ट्रिय इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका प्रमुख डाक्टर बासुदेव पाण्डेले जानकारी दिनुभएको...
एन्टिजेन टेष्टको सकारात्मक पक्ष केके हुन् ? यसको नकारात्क पक्ष छ कि छैन ? (भिडियोसहित)
२९ असोज, २०७७ काठमाडौं । सरकारले अब पीसीआर परीक्षणसँगै एन्टिजेन वेस्ड परीक्षण गर्ने भएको छ । यो परीक्षण कस्तो परीक्षण हो ? के यो परीक्षण प्रभावकारी छ । सहकर्मी सृजना बरालले जनस्वास्थ्यविद् डाक्टर समीरमणि दीक्षितसँगै कुराकानी गरेकी छन् ।
एन्टिजेन परीक्षण एक हजार रुपैयाँ तोकियो
२७ असोज, २०७७ काठमाडौं । कोरोना संक्रमण समुदायस्तरमा फैलिदै जाँदा स्वास्थ्य मन्त्रालयले एन्टिजेन परीक्षण समेत अघि बढाउने निर्णय गरेको छ । मन्त्रालयले ‘परीक्षण मापदण्ड’ परिमार्जन गर्दै एन्टिजेन परीक्षणका लागि अनुमति दिएको हो । यो परीक्षणका लागि मन्त्रालयले १ हजार...